६० प्रतिशत महिलामा युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हुने सम्भावना, कसरी बच्ने ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ महिला/बाल स्वास्थ्य ∕ ६० प्रतिशत महिलामा युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हुने सम्भावना, कसरी बच्ने ?
६० प्रतिशत महिलामा युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हुने सम्भावना, कसरी बच्ने ?
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७९ वैशाख २५ गते, १२:१६ मा प्रकाशित
पिसाब पोल्ने, पेट दुख्ने जस्ता समस्याका साथै उच्च ज्वरो आउने मुख्यतया युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन (युटीआइ) को लक्षण मानिन्छ। यो मूत्र प्रणाली को कुनै पनि भाग मा हुन सक्छ। धेरैजसो अवस्थामा मूत्राशय र मूत्रमार्गमा संक्रमणको अवस्था देखिन्छ, जसले धेरै गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
पुरुषको तुलनामा महिलाहरूलाई यूटीआई हुने जोखिम बढी हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार करिब ५५-६० प्रतिशत महिलाले जीवनको कुनै न कुनै समयमा यूटीआईको सामना गर्न सक्छन्। फोहोर शौचालय, सामुदायिक शौचालयको प्रयोग वा महिनावारी र यौनसम्पर्कको समयमा सरसफाइमा ध्यान नदिँदा यस्तो समस्याको जोखिम बढी हुन्छ ।
युटीआइलाई सामान्यतया डाक्टरले तोकेको एन्टिबायोटिक्सबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । यद्यपि यो समस्या बारम्बार रहिरहने हो भने तपाईले सावधान रहनु आवश्यक छ। यसले मृगौला रोग पनि निम्त्याउन सक्छ ।
मधुमेह रोगीमा युटीआइको समस्याले मृगौलालाई हानि पुर्‍याउन सक्छ, त्यसैले युटीआइको लक्षणहरूमा सावधानी अपनाउनुपर्छ। केहि सरल उपायहरू प्रयोग गरेर, तपाइँ युटीआइको जोखिम कम गर्न सक्नुहुन्छ।
‘युटीआइको समयमै पत्ता लगाउन आवश्यक’
यूटीआइका लक्षण समयमै पत्ता लाग्ने हो भने यसको लक्षणले गम्भीर रुप लिनबाट बच्न सकिने स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् । यसका लागि संकेतहरूको लागि ध्यानमा राख्नुहोस्।
पिसाब फेर्न मन लागु, बारम्बार पिसाब लाग्ने।
पिसाब गर्दा जलन हुने ।
फोमयुक्त र दुर्गन्धित पिसाब।
पिसाबको रंग रातो, उज्यालो गुलाबी देखिन्छ।
महिलाहरुको पेटको क्षेत्रमा कडा दुखाइ छ।
यस्ता संकेतहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। आउनुहोस् यूटीआईबाट बच्न अपनाउन सकिने उपायहरूबारे जान्नुहोस्।
अधिक तरल पदार्थ पिउनुहोस्
पानी पिउनु यूटीआइबाट बच्नको लागि सबैभन्दा लाभदायक उपाय मानिन्छ। पानी पिउनाले पिसाब पातलो रहनुका साथै बारम्बार पिसाब लाग्दा मूत्रमार्ग सफा रहन्छ । पानी पिउने बानीले मिर्गौला सफा राख्न पनि मद्दत गर्छ। मिर्गौला सफा राख्दा यूटीआइको जोखिम कम हुन्छ। कम पानी पिउने व्यक्तिहरूलाई यूटीआईको उच्च जोखिमका साथै अन्य विभिन्न प्रकारका मूत्र समस्याहरू हुन सक्छन्।
सरसफाइको ख्याल राख्नुहोस्
युटीआइका धेरैजसो केसहरू खराब सरसफाइका कारण हुन्छन्। यो महिलाहरु को लागी विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ। महिलाहरूले महिनावारीको समयमा राम्रो सरसफाइका उपायहरूमा विशेष ख्याल राख्नुपर्छ, यसले संक्रमणबाट बचाउन मद्दत गर्छ। बारम्बार प्याड परिवर्तन गर्नु र आफ्नो जननांग सफा राख्नुले तपाईंलाई UTIs को जोखिमबाट जोगाउन सक्छ।
लुगाको ख्याल राख्नुहोस
टाइट-फिटिङ्ग लुगा लगाउने बानीले तपाइँको यूटीआइको जोखिम बढाउन सक्छ। जननांग नजिकैको टाइटनेसले अत्यधिक पसिना निम्त्याउँछ, जसले ब्याक्टेरियाको वृद्धि र मूत्रमार्गमा प्रगति गर्ने जोखिम निम्त्याउन सक्छ। सधैं सुती अन्डरवियर लगाउनुहोस् र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। यदि तपाईलाई बारम्बार युटीआइबाट पीडित भइरहनुभएको छ भने अवश्य यस बारे डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
मृगौला खराब बनाउन सक्ने हाम्रा यी १० बानी